घरपालुवा जनावर बाहिर छाडे कडा कारबाही ! « Khabarhub
घरपालुवा जनावर बाहिर छाडे कडा कारबाही !
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पुरा विश्व समूदायलाई तनाव दिएको छ । यस स्थितिमा मानिसहरु कुनै वस्तु वा कार्यबाट भाइरस फैलन्छ भनेको सुनेमा तत्काल त्यसबाट दूरी बनाउने गर्दछन् ।
पशुको असुरक्षित सम्पर्कबाट कोरोना सर्ने भनेसंगै धेरै मानिसले पशुको निकट जान छाडे । अझ कतिपयले ती जनावरलाई बाहिर छाड्न थाले । तर भारतको आसाम सरकारले भने एक आदेश जारी गरेको छ ।
जसअन्तर्गत यदि कसैले कोरोना भाइरसको डरले घरपालुवा जनावर घर बाहिर छाडेमा कानूनी कार्रवाहीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
असम प्रहरीले जिल्लाका सबै प्रहरी प्रमुखलाई कोरोना भाइरसको आशंकामा पालुवा जनावर छाडेको पाइएमा कानूनी कारबाही आदेश जारी गरेको छ । असामका कैयौं ब्यवसायीले पाल्तु जनावरबाट दूरी बनाउने आफ्नो पसलमा नै बन्दगर्दै आएका छन् ।
कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका बीचमा आएका केहि अफवाहसंँगै पाल्तु जनावरबाट पनि कोरोना सर्ने हल्ला छ । तर यसको अहिलेसम्म आधिकारिक प्रमाण भने जुटिसकेको छैन ।
यसैबीच असाम राज्यपुलिस मुख्यालयले घरपालुवा जनावरलाई छाड्नेलाई ‘पिपुल फर द एथिकल ट्रिटमेन्ट अफ एनिमल्स’ (पेटा) को नियम अनुसार कारबाही गर्न आदेश दिएको छ । यतिमात्र होइन, जनावर उपर सहि ब्यवहार नगर्ने हरेकलाइ कारबाहि गर्न आदेश दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७७, शुक्रबार ११ : ११ बजे